सावधान : छाला गोरो बनाउने क्रिम प्रयोग गर्नुहुन्छ ? छालाको क्यान्सर, कलेजो-मृगौला गम्भीर असर Bizshala -
सावधान : छाला गोरो बनाउने क्रिम प्रयोग गर्नुहुन्छ ? छालाको क्यान्सर, कलेजो-मृगौला गम्भीर असर
काठमाण्डौ । उपभोक्ताहरूलाई छाला गोरो बनाउने क्रिमहरूले रङ्ग मेट्ने वस्तुजस्तै काम गर्ने भन्दै प्रयोग नगर्न सुझाव दिइएको छ।
ब्रिटेनको स्थानीय सरकारको सङ्घले हालै विभिन्न ठाउँमा छापा मारेपछि प्राप्त जानकारीका आधारमा त्यस्ता उत्पादनहरू "कुनै हालतमा प्रयोग नगर्न" सुझाव दिएको हो। त्यस्ता धेरै उत्पादनमा रङ्ग खुइल्याउने हाइड्रोक्विनोन भन्ने तत्व रहेको र तिनमा पारो तत्व (मर्करी) पनि हुन सक्ने बताइएको छ।
बीबीसीका अनुसार द ब्रिटिश स्किन फाउन्डेशनले आफ्नो छालाबारे कुनै चिन्ता भए डाक्टरसँग कुराकानी गर्न आग्रह गरेको छ। फाउन्डेशनले भनेको छ- यस्ता उत्पादनहरू अनलाइन, खुद्रा विक्रेता र अन्य पसलमा राख्ने गरिएको छ। र, तिनले धेरैजसो त्यसमा प्रयोग भएका सामग्री र तिनको मात्रा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्ने गरेका छैनन् जसले उपभोक्ताहरू खतरामा परेका छन्।
एलजीएले भनेको छ- हाइड्रोक्विनोनले छालाको माथिल्लो तह नै नष्ट पारिदिन सक्छ जसले छालाको क्यान्सर, कलेजो र मृगौलामा पनि घातक असर पार्न सक्छ। पारोले पनि जीवन खतरामा पार्ने खालका स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउन सक्छ।
मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सम्भावना भएकाले नै चिकित्सकले प्रेसक्रिप्शनमा नलेखेसम्म हाइड्रोक्विनोन स्टेरोइड वा पारोयुक्त पदार्थ प्रयोग गर्न यूकेमा प्रतिबन्धित छ।
बीबीसीका अनुसार एलजीएले हालै विभिन्न स्थानबाट कैयौँ उत्पादन नियन्त्रणमा लिएको थियो। डागेनह्यामस्थित एउटा पसलबाट हाइड्रोक्विनोनयुक्त ३६० वटा उत्पादन नियन्त्रणमा लिइएको थियो। त्यसमा प्रयोग भएका सामग्रीहरू सही रूपमा उल्लेख गरिएका थिएनन्। पसलेहरूलाई ठूलो जरिवाना लगाइयो ।
त्यसैगरी साउथवार्क काउन्सिलले छाला गोरो बनाउने २, ९०० प्रकारका क्रिम नियन्त्रणमा लिएको थियो। तीमध्ये धेरैजसो नाइजेरियाबाट सिधा आयात गरिएको थियो। यो प्रकरणमा त्यस्ता उत्पादन विक्री गरेका व्यक्तिलाई जेल हालिएको थियो जसलाई यूकेकै पहिलो घटना भनिएको छ।
त्यसैगरी क्यामरुनबाट ल्याइएका त्यस्ता उत्पादन ग्याटविक विमानस्थलमा पक्रिएको थियो। तिनमा पनि हाइड्रोक्विनोन पाइएको थियो। सङ्घका एक अधिकारी सिमोन ब्ल्याकबर्नले भने "छाला गोरो बनाउने क्रिममा प्रतिबन्धित सामग्रीहरू पाइएका छन् जुन असाध्यै खतरनाक छन्। तिनले तपाईँका स्वास्थ्य खतरामा पार्छन्। जिन्दगीभरिका लागि दागी बनाइदिन सक्छन् या ज्यानै पनि लिन सक्छन्। त्यसैले कुनै हालतमा प्रयोग गर्न हुँदैन।"
"उपभोक्ताले आफूले लगाउने छालाका क्रिममा के तत्व प्रयोग गरिएको छ भन्ने जाँच्नुपर्छ र अति कम मूल्य छ भने कतै नक्कली त होइन भन्ने शङ्का पनि गर्नुपर्छ। हाइड्रोक्विनोन तत्व भएको क्रिम त कहिल्यै प्रयोग गर्न हुँदैन।"
द ब्रिटिश स्किन फाउन्डेशनकी प्रवक्ता लिसा बीकरस्टाफले भनिन्, छाला गोरो बनाउने गैरकानुनी क्रिमको मुद्दा हरके वर्षजसो आउने गरेको छ। उनले भनिन्, "यस्ता उत्पादनमा प्रयोग भएका सामग्रीले गम्भीर स्वास्थ्य समस्या ल्याउन सक्छन्। त्यसैले ती प्रयोग नगर्न आग्रह गर्छौँ।"
उनले आफ्नो छालाको रङ्गबारे कुनै चिन्ता भए चिकित्सकसँग सल्लाह लिन सुझाइन्।